Project Zero dia mahita lesoka fiarovana 11 amin'ny sisin'ny Galaxy S6 | Androidsis
Manuel Ramirez | | About us, Samsung, fiarovana
Ireo sosona manokana izay ampidirin'ny mpanamboatra ao amin'ny findainy dia iray amin'ireo vato misakana ka, indraindray, Mandany fotoana ny fanavaozana Android kely kokoa noho ny ilaina. Ny sosona toy ny HTC miaraka amin'ny Sense na Samsung TouchWiz, dia milaza fa ny injenieran'ny rindrambaiko ataon'ireto mpanamboatra ireto dia mila mampifanaraka ny zava-baovao ao amin'ny Android amin'ny azy manokana mba hahafahan'ny mpampiasa mahatsapa fa manana ny kinova vaovaon'ny OS izy ireo ary inona no ho ilay fanatsarana an'io rindrambaiko io ho toy ny mpandefa, kisary ary bara manokana izay, amin'ny farany, dia manemotra ny fahatongavan'i Lollipop sy Marshmallow.
Ny iray amin'ireo fisafotofotoana misy sosona toa an'i TouchWiz, izay maika hamoaka izany Lollipop vaovao na Marshmallow haingana araka izay tratra, dia miaraka aminy fepetra fiarovana lehibe sasany izay afaka manafika ny mpampiasa mandroso na ny vondron'ireo manam-pahaizana fa tsy maintsy manandrana ireo vokatra Android samihafa Google izay manenika ny talantalan'ny orinasa ara-barotra. Just Project Zero, ekipan'ny manam-pahaizana momba ny fiarovana ao amin'ny Google, dia nahita olana fiarovana 11 lehibe tao anatin'ny Samsung Galaxy S6 Edge tao anatin'ny herinandro.
1 Tetikasa Zero hitadiavana lesoka
2 Valo avy amin'ny bibikely 11 no nasiana patch
Tetikasa Zero hitadiavana lesoka
Ka mila vondron'olona mpijirika manam-pahaizana, omeo herinandro izy ireo hitsapana ny filaminana amin'ny telefaona Android ary afaka andro vitsivitsy dia hanomboka hahita olana amin'ny fandriam-pahalemana izay mety hatrehin'ireo mpampiasa mandritra ny fotoana ela izy ireo, izay mety hitarika andianà fampahalalana ratsy sy tsikera avy amin'ny media sy ny vondrom-piarahamonina.
Ny Project Zero dia ekipa Google manadihady ary nahavita mahita lavaka fiarovana 11 amin'ny marika vaovao Samsung Galaxy S6 ao anatin'ny herinandro monja. Anisan'ireo lesoka 11 lehibe amin'ny fiarovana ireo, mamela ny "mpanafika" hanoratra rakitra amin'ny rafitry ny niharam-boina nefa tsy nahazoana alalana.
Ny Project Zero, hahitana lesoka azo antoka amin'ny fiarovana, dia mizara ekipa roa, ny iray ny eropeana ary ny iray ny Amerika avaratra, ary mifantoka amin'ny fikarohana fomba hahitana izy ireo mahazo fidirana amin'ny hafatra, sary sy fifandraisana amin'ny telefaona lavitra na amin'ny alàlan'ny fampiharana apetraka amin'ny Google Play izay tsy manana alalana amin'izany. Amin'ny farany, ny mpikaroka dia manandrana mampiditra ny kaody hafahafa ao anaty finday na dia voafafa tanteraka aza.
Valo avy amin'ny bibikely 11 no nasiana patch
Tonga ny ankamaroan'ny lavaka fiarovana avy amin'ny mpanara-maso na mpamily ny fitaovana sy ny fanodinana sary araka ny voalazan'i Natalie Silvanovich, ary hita faingana dia haingana izy ireo. Nolazainy ihany koa fa ny sasany amin'ireo olana dia kely fotsiny, ka nahatonga azy ireo hampidi-doza tokoa satria ny hacker dia afaka mamantatra sy manararaotra azy ireo mora foana.
Ny ekipa dia nitatitra ny zavatra hitan'izy ireo tamin'i Samsung, izay efa nametaka valo tamin'ny bug 11 ny filaminana. Ireo telo tsy hita, izay tsy dia manandanja loatra toy ny ambiny, dia ahitsy amin'ny volana Novambra.
Raha ny ankamaroan'ny lesoka azo antoka nohitsin'i SamsungNy lasa mampiahiahy dia ny ekipa manolo-tena afaka mahita bibikely be dia be ao anatin'ny fe-potoana fohy toy izany. Izay nolazain'i Silvanovich fa ny hafainganana amin'ny famahana ny olan'ny Samsung dia zavatra antenaina.
Tamin'ny volana Aogositra tamin'ity taona ity, nanambara i Samsung sy Google fa hamaha olana amin'ny findainy izy ireo fanavaozana mitsikera matetika kokoa, miaraka amin'ny Google mihitsy no mamoaka fanavaozana ny fitaovany rehetra Nexus isan-kerinandro, ary Samsung manavao ny fitaovany Galaxy isam-bolana.
Izany dia mitondra antsika amin'ilay voalaza teo am-piandohana, sosona manokana izay maimaika mazàna no manjaka tsy ho tavela ao amin'io hazakazaka io hitondra vaovao farany ho an'ireo mpampiasa, toa ny an'i Marshmallow, ary raha ny filazan'ny malaza dia tsy mpanolo-tsaina tsara mihitsy ny maika. Noho io antony io dia misy ny mpanamboatra izay manomboka mahatsapa fa ny sosona manokana manakaiky ny an'ny Android dia mamela azy ireo ho mailaka kokoa ary tsy tokony handany fotoana, ary vola be, amin'ny fitondrana ireo kinova vaovao andrasan'ny olona an-tapitrisany ireo mpampiasa erak'izao tontolo izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ny manam-pahaizana Google dia mahita lesoka 11 amin'ny fiarovana amin'ny Galaxy S6 Edge ao anatin'ny herinandro
Fa maninona i Nintendo no nianjera taorian'ny fanambarana ny lalao finday Miitomo-ny?